Cristiano Ronaldo oo ka hadlay imaatinka Erik ten Hag ee kooxda Manchester United – Gool FM - Idman news
Cristiano Ronaldo oo ka hadlay imaatinka Erik ten Hag ee kooxda Manchester United – Gool FM
(Manchester) 14 Maajo 2022. Xiddiga reer Portugal ee Cristiano Ronaldo ayaa xaqiijiyay inuu aad ugu faraxsan yahay imaatinka tababaraha reer Holland ee Erik ten Hag si uu u hoggaamiyo kooxda Manchester United, laga bilaabo xilli ciyaareedka soo socda.
Erik ten Hag ayaa shaqada tababarka kooxda Manchester United kala wareegi doona tababaraha ku meel gaarka ah ee Ralf Rangnick, kaddib kulanka ugu dambeeya xilli ciyaareedkan ay la ciyaareen naadiga Crystal Palace Axad 22-ka bishan May.
Cristiano Ronald ayaa wareysi uu ku bixiyay website-ka rasmiga ah ee Manchester United, wuxuu kaga hadlay imaatinka Erik ten Hag ee kooxda, wuxuuna yiri:
“Waxa kaliya ee aan ogahay ayaa ah inuu shaqo fiican ka qabtay Ajax iyo inuu yahay tababare khibrad leh.”
“Wax walba waa inay isku bedelaan sida uu rabo, waxaana rajeynayaa inaan guulo la gaarno isaga.”
“Waan ku faraxsanahay, kaliya maahan ciyaartoy ahaan laakiin sidoo kale taageere ahaan, waxaan u rajaynayaa guul waxana aan aaminsanahay in aan ku laaban karno ku guuleysiga koobabka sanadka dambe.”
Ronaldo ayaa sanadkan Manchester United u dhaliyay 24 gool tartamada oo dhan waxana uu ka caawiyay xulkiisa Portugal inuu u soo baxo koobka aduunka 2022, laakiin waxa jira niyad-jab inkasta oo ay United ku fashilantay inay boos ka hesho Champions Leaque-ga xilli ciyaareedka dambe.
Previous Liverpool iyo Chelsea… (Xog walba oo aad uga baahantahay ciyaarta fiinaalka FA Cup) – Gool FM
Next Xiddig ka tirsan Inter oo ku dhow inuu u dhaqaaqo Chelsea – Gool FM